देउवाले किन लिएनन‍् हारको जिम्मा ? | Rajmarga
देउवाले किन लिएनन‍् हारको जिम्मा ?
काठमाडौ । विभिन्न विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा कांग्रेस बैठक बस्न सकेन। पार्टी सभापतिको तर्फबाट महामन्त्री शशांक कोइरालाले बनाएको प्रतिवेदनमा पौडेलसहित अन्य पक्ष सहमत नहुँदा शनिबार बैठक बस्न नसकेको हो। शनिबार दिनभर सहमतिका लागि प्रयास भए पनि त्यसो हुन सकेन।
शनिबार दिउँसो पार्टी कार्यालयमै आयोजित मुस्लिम संघको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले चाँडै पार्टीको महासमिति भेला बस्न लागेको बताएका थिए। कार्यक्रममा नेता पौडेलले कम्युनिस्टलाई देखाएर सभापति देउवाले आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। अन्न्पूर्ण पोष्टमा खबर छ।
Previous post: विवादमाअनुसन्धान विभाग: एमाले-माओवादीभित्रै मिलेन कुरा
Next post: व्यापारीले दिन पाउने छैनन् अब पाँच हजारभन्दा बढी चन्दा